यस्ता छन् ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान - Filmy News Portal Of Nepal
हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठ विवाहित हुन् भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका होलान् । तर उनी ग’र्भ’ वती भएकी छन् । जसका कारण उनले गर्दै आएका कार्यक्रम पनि छोडेकी छन् । तर टेलिसिरियलमा जिग्रीको जोडीका रुपमा उनी निकै जमेकी छन् । उनको श्रीमान्का बारेमा धेरै कुरा भने बाहिर आएका छैनन् । उनले श्रीमानको नामको ट्याटु पनि बनाएकी छन् ।
हाल उनी रियालिटी शो डान्सिङ वीथ द स्टारमा सहभागी भएकी थिइन् । तर गर्भवती भएकै कारण उनी सो बाट बाहिरिएको बताइएको छ ।
हालै एक युट्युव च्यानलसँको कुराकानीमा भद्रगोल टिमले यसबारे खुलासा गरेको छ । ग’र्भ’व’ती भएका कारण उनी अब छिट्टै पुनः प्रशारण हुन लागेको भद्रगोलमा समेत नदेखिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सिरियलमा हाँस्य कलाकारको भूमिका निमाउने रक्षाको मन निकै कोमल छ । भद्रगोलमा जिग्रीकी मायालु प्रेमिका बनेकी रक्षा वास्तविक जीवनमा रुन्ची छिन् । सानोतिनो कुरामा पनि तुरुन्तै रोइहाल्ने बानी उनी स्वयम्लाई मन पर्दैन ।
यसले रक्षालाई एउटा कुरामा भने फाइदा भएको छ । अभिनय गर्दा पनि उनलाई रुनका लागि ग्लीसिरिन चाहिदैन । ‘प्राय सुटिङमा म त्यत्तिकै रोइदिन्छु,’ रक्षाले भनिन् । फेशनको मामलामा उनी औधी सौखिन छिन् । पैसा भएपछि लुगा किन्न दौडिहाल्छिन् । लुगा र जुत्तामा विषेश सोख छ उनलाई । उनको अर्को सौख छ, पिकनिक जाने । पिकनिकमा उलाई निकै रमाइलो लाग्छ । तर, तीन वर्षदेखि पिक्निक जान नपाएको सुनाइन् । एक सयको हाराहारीमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी रक्षाले ६५ भन्दा बढी विज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् । राम्रो पाए मात्रै फिचर फिल्ममा काम गर्ने उनी बताउँछिन् ।
यो पनि : काठमाडौंमा घर बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन् पालना गर्नुपर्ने प्रमुख ५ नियम
आफूसँग भएको जग्गामा कस्तो घर बन्ला ? कति तले बनाउन सकिएला ? भनेजस्तो बनाउन केही समस्या आइपर्छ कि? यस्ता प्रश्न घर निर्माण सोच बनाउँदा सुरूआतमै आइपर्छन्। नियम-कानुन र तरिका जानिएन भने समस्या थपिन सक्छ। त्यसैले देशका प्रमुख सहरमा घर बनाउन स्थानीय सरकारले तय गरेका नियम बुझ्नुपर्छ।
घर बनाउँदा आफ्नो क्षेत्रको नियम के-कस्तो छ बुझ्न वडा कार्यालय उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ। हामीले यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घर बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने केही नियमबारे चर्चा गरेका छौं। महानगरपालिकाका इञ्जिनियर तथा भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले प्रमुख ५ नियमबारे जानकारी दिएका छन्। पहिलो, कति जग्गामा कति क्षेत्र ओगटेर घर बनाउन पाइन्छ? नियमअनुसार पुराना बजार क्षेत्र, हनुमानढोका, ठमेल, असन लगायत क्षेत्रमा ८ आनासम्म जग्गा छ भने ८० प्रतिशतसम्म पिलर वा घरको संरचनाले समेट्न पाइन्छ।
पुराना बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर ८ आनासम्म जग्गा छ भने ७० प्रतिशत घरले समेट्न पाइन्छ। तर जग्गा ८ आनादेखि एक रोपनी छ भने ६० प्रतिशतमा मात्रै पाइन्छ। त्यस्तै एक रोपनीभन्दा धेरै छ भने नियमअनुसार ५० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन पाइन्छ। यो काठमाडौं महानगरपालिकाको नियम हो। ‘एक आना भन्नाले ३४२.२५ वर्गफिट हो। जग्गा चार आनाको छ भने भुइँ क्षेत्र ७० प्रतिशत मात्रै समेट्न पाइन्छ,’ विभागीय प्रमुख शाक्य भन्छन्, ‘७० प्रतिशत भनेको चार आनामध्ये करिब तीन आना हो। पुरानो बजारभन्दा बाहिर घर बनाउँदा ७० प्रतिशतमा मात्रै बनाउन पाइन्छ।’
दोश्रो, जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको अनुपात हो। प्राविधिक भाषामा यसलाई ‘फ्लोर एरिया रेसियो (फार)’ भनिन्छ। सामान्यतया घरको दस फिट बराबर एक तला हुन्छ। सोअनुसार एक हजार वर्गफिट जमिनमा तीन तलाको घर बनाउने हो भने घरको क्षेत्रफल तीन हजार वर्गफिट हुन आउँछ। काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा आवासीय भवन बनाउँदा जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा साढे चार गुणा बढी क्षेत्रफल ओगटेर घर बनाउन सकिने नियम छ। व्यवसायिक र अपार्टमेन्टका लागि छुट्टै नियम हुन्छन्। यहाँ हामीले आवासीय घरको मात्र कुरा गरेका छौं।
‘फ्लोर एरिया रेसियोमा पार्किङ, बरन्डा, भर्‍याङले ओगट्ने क्षेत्र, बेसमेन्ट लगायतको हिसाब हुँदैन। घरको पिलरभित्र लगाइएको पर्खाल मात्रै पर्छ,’ शाक्यले जानकारी दिए, ‘योजनाबद्ध आवासीय क्षेत्रमा भने साढे तीन गुणा क्षेत्रफलमा मात्र बनाउनुपर्छ।’ उनका अनुसार नियम विपरीत नक्सांकन गरिएका घरको नक्सा पास हुँदैन। नक्सा पास नगरी संरचना बनाउनुहुँदैन। यसरी बनाइएका घर जुनसुकै बेला भत्काउने वा चर्को जरिवाना तिराउने अधिकार पालिकालाई हुने उनले जानकारी दिए।
तेश्रो, बाटोका लागि छाड्नुपर्ने दुरी। मुख्य बाटोमा घर–घडेरी परेपछि उठिबास लागेको खबर हामीले बारम्बार सुनिरहेकै छौं। त्यसैले पनि आफ्नो जग्गा कस्तो ठाउँमा छ वा घर बनाउन पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्ने शाक्य बताउँछन्। शाक्यका अनुसार बाटोबाट संरचना बनाउने स्थानसम्म छोड्नुपर्ने दुरीलाई प्राविधिक भाषामा ‘सेट-ब्याक’ भनिन्छ।
‘यो सामान्यतया १.५ (डेढ) मिटर छोड्नुपर्छ,’ शाक्यले भने, ‘६ मिटर बाटोले छोएको स्थानमा घर बनाउने भए बाटो नापेरै डेढ मिटर छोड्नुपर्छ।’यी नियम आफ्नो घर बन्ने पालिका वा सडक विभागको मापदण्डअनुसार फरक हुनसक्ने उनी बताउँछन्। अहिले सानो बाटो भए पनि पछि ठूलो हुनसक्ने सम्भावना भएका स्थानमा विचार पुर्‍याउन उनी सुझाउँछन्। पहिले सतर्क भइएन भने पछि झन्झटिलो हुन सक्छ।
हेर्नुहोस् केहि तस्विरहरु: